Ukuphupha ngokukhetha Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Igravel sisanti enamatye erhabaxa, ehlala ikhutshwa emngxunyeni wegrabile, ngakumbi kwimizi-mveliso yokwakha ukuvelisa ikonkrithi kunye nezinto zokubuyisela umva. I-Quartz gravel isetyenziswa kwiglasi okanye kumzi-mveliso we ceramic.
Kwezinye iindawo, igrabile ikwabizwa ngokuba ngumhlaba. Ubungakanani begrabile buphakathi kweemilimitha ezimbini ukuya kuma-63. Ukusuka kubungakanani obuphakathi, abantu bayathanda ukuthetha malunga neengqalutye. Igravel iza ngemibala eyahlukeneyo, ukusuka kumbala omdaka ukuya kwililac.
Kodwa ngaphambi kokuba sibabone benjalo, iingqalutye sele zivela kude, kuba indawo yabo yemvelaphi ihlala ezintabeni. Oko kubizwa ngokuba ziintlenga kudalwa kukukhukhuka kwamatye apho, athi emva koko asiwe kwiintlambo zemilambo yimilambo esezintabeni okanye ngumkhenkce. Nangona kunjalo, xa sifika kuyo ngamanye amaxesha, asiboni ukuba igrabile ihambe amawaka eminyaka.
Kodwa ukuba ibonakala njengophawu lwamaphupha emaphupheni ethu, oku kunokubangela ukuthandabuza kwaye kusenze sijonge unxibelelwano nobomi bethu.
1 Uphawu lwephupha «igrabile» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «igrabile» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «igrabile» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «igrabile» - ukutolikwa ngokubanzi
Umfanekiso wephupha "uhlalutye" luphawu lokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha. ithamsanqa elingalindelekanga kunye nengeniso etyebileyo. Umphuphi unokulindela ukufumana umvuzo kungekudala ngenxa yesenzo sakhe sokungazingci.
Nangona kunjalo, igrabile ishiya isicelo kumntu ophuphayo njengomfanekiso wephupha. Kufuneka azibuze ukuba uyithathaphi ebomini izakhono ezisebenzisekayo isetyenziswe ngokuthe ngqo nangempumelelo kwaye ukuba kukho nasiphi na isidingo sophuculo apha. Usenokungabazi ubuchule bakho, okukhokelela ekubeni iitalente zingasetyenziswa.
Ukuba ubona igrabile kunye nomdaka omdaka, oku kungazisa ilahleko kuloo mntu kuthethwa ngaye. Ke ngoko, nokuqikelela akufuneki kuthathelwe ingqalelo. Ukuba uhambisa igrabile ngekiriva ephupheni, kuya kufuneka uqaphele ukuba uphethe kakhulu kunye nawe kwinqanaba lokomoya.
Nabani na osebenza igrabile ephupheni kwaye ke, umzekelo, ofafaza indlela, uya kukhusela isenzo sakhe esilumkileyo ekuvuseni ubomi kwingozi. Ukuba igrabile esemendweni yenza ukuba ukuhamba kube nzima, oku kunokukuchaphazela Ibhotile yezemali Iingoma. Ngakolunye uhlangothi, ukuba uhamba kancinci kwi-gravel ebekiweyo, unokulindela ukwenza imali engenamandla, eyaziwa ngokuba yi-moss.
Uphawu lwephupha «igrabile» - ukutolikwa kwengqondo
Rhoqo sikhumbula izinto ezivela kwilizwe lethu lamaphupha ezazintle kwaye ngenxa yoko zingalibaleki. Kuba amatye egrabile amancinci kakhulu kwaye ayaziwa, ngaphandle kokuba kugcwele kakhulu, oku kukucaciswa kwengqondo ngephupha njengophawu lwe izinto ezincinci zobomi ziyaqondakala. Kumntu ophuphayo, oku kunokuthetha ukunikela ingqalelo ngakumbi kwinto ebonakala ingabalulekanga kuye.
Inokuthetha ntoni le nto? Mhlawumbi ibinzana elibonakala ngathi liqhelekileyo elivela kumhlobo ukuba kufuneka enze into ebalulekileyo ukuba ekugqibeleni angalifumana ixesha. Ungathini xa unikezela ngoncedo lwakho koku? Sidla ngokungahoyi okanye ukuva iinkcukacha ezincinci zobomi bemihla ngemihla ezinokubaluleka kakhulu komnye umntu. Isimboli yamaphupha «igrabile» ifuna ukukhulisa ukuqonda kwakho kwaye ngakumbi Ingqwalaselo epheleleyo cebisa.
Kwelinye icala, ukuba uyatyibilika, uya kuba ulungile xa uhamba ubomi ngocoselelo kwaye ungazibeki emngciphekweni ngokungeyomfuneko.
Uphawu lwephupha «igrabile» - ukutolika kokomoya
Ngokwembono yokomoya, igrabile ekutolikweni kwamaphupha ingumfuziselo we Microcosm.